Uhlaka lweNdlovukazi Umbhede Ophakanyisiwe
Ukubhekana nenani elikhulu kangaka lefenisha, ukucatshangelwa okuningi kufanele kuthathwe. Impela, amafreyimu ombhede, izinhlobo ziningi njengemibhede kusuka kusayizi kuya kokuqukethwe. Ngakho-ke, uma uzizwa unqikaza noma kunzima kuwe ukunquma ukuthi ikuphi okufanele kube ukukhetha kuqala kanjani, kuthiwani ngokufunda lo mbhede wendlovukazi ophakamise ikhanda lebhodi?
Ngenjwayelo, esikuthatha isikhathi ukucabanga ngakho ukuthi ungawuthola kanjani umatilasi olungile futhi omuhle. Noma kunjalo, noma ngubani othenge uhlaka lombhede uyavuma ngokubaluleka kwalo okuvame ukuthatha umzamo omkhulu. Ukubhekana nenani elikhulu kangaka lefenisha, ukucatshangelwa okuningi kufanele kuthathwe. Impela, amafreyimu ombhede, izinhlobo ziningi njengemibhede kusuka kusayizi kuya kokuqukethwe. Ngakho-ke, uma uzizwa unqikaza noma kunzima kuwe ukunquma ukuthi ikuphi okufanele kube ukukhetha kuqala kanjani, kuthiwani ngokufunda lo mbhede wendlovukazi ophakamise ikhanda lebhodi?
Uhlaka lwendlovukazi lukakhanda oluphakanyisiwe lwibhodi lesitatimende elifanele ukubekwa kunoma iliphi igumbi lokulala elinezitayela ezahlukahlukene. Isiphetho esihle esimpunga esenziwe kahle kanye nomklamo obushelelezi kukwenza ubukeke buhle futhi buvikela. Ojantshi basezinhlangothini abaphakanyisiwe bakha ukubukeka okuhle futhi okunomusa okulingene ngokuphelele nebhodi lasekhanda elijwayelekile elifakwe phezulu. Umugqa skeleton usekela ngokuphelele umatilasi wakho. Amabhodi ezungezwe ngokhuni angalungisa umatilasi phansi. Imilenze yombhede eqinile futhi esezingeni eliphezulu idizayinela ukubukeka okuhlukahlukene okuhambisana kahle nezitayela nezintandokazi eziningi. Konke okudingayo ukufaka ngokushesha futhi kalula loluhlaka lombhede kufakiwe egumbini. Ithunyelwa ngokushesha futhi isongwe ngokuphepha ebhokisini elilodwa, ngqo endaweni yakho yokugcina impahla.
Thayipha: Ifenisha yasekhaya, Ikamelo lokulala
Izinto: Indwangu; Insimbi;
Ukubukeka: Ifenisha Yamanje
Indawo Yomsuka: IGuangdong, China
Igama lomkhiqizo: Uhlaka lwendlovukazi lukabhodi oluphakanyisiwe
Inombolo yemodeli: I-BF-AU01-04
Izinto Zokumboza: Indwangu
Umsebenzi: Indawo yokudlela yokudlela
Ubukhulu(cm): 137L * 190W
Usayizi wokupakisha(cm): 139L * 192W
Isikhathi sokukhiqiza: 30-45izinsuku
Imigomo Yokuhweba: FOB